BricMaker Nyaya |
Ungasarudza sei huni yakakodzera zvinoenderana nemamiriro emuno?
Parizvino, hombe huru yezvidhinha zvevhu nevhu muChina matangi emoto uye ovhiri (chinofambisa tunnel kiln). Tunnel kiln ine mhando dzakasiyana uye dzinogona kuverengerwa zvichibva pahunhu hwakasiyana: inogona kuverengerwa seakakura muchinjikwa zvikamu tunn ...
Nzira yekuita sei inonzwisisika kiln dhizaini?
Kunyangwe dhizaini yemoto iri inonzwisisika uye yakakwana, inodzivirira zvakananga kune vanoisa mari uye zvakare inotadzisa hunhu hwehuni. Kuburikidza nekuenzanisa kwakawanda pakati pemitsara yakasiyana yekugadzira, takaona kuti mhando imwechete yezvigadzirwa uye yakafanana mhando kil ...